Ngiqala kanjani social media? Lo ngumbuzo engiyaqhubeka nokuwuthola uma ngikhuluma ngomthelela wezinkundla zokuxhumana emizamweni yebhizinisi yokumaketha. Okokuqala, ake sixoxe ngokuthi kungani inkampani yakho ingafuna ukusebenza kuma-social media.
Izizathu zokuthi kungani Amabhizinisi Esebenzisa Ukumaketha Kwezenhlalo
Nayi ividiyo enhle yokuchaza ngezindlela eziyi-7 lapho ukumaketha kwakho kwezokuxhumana kungashayela imiphumela yebhizinisi.
Ungaqala Kanjani Ngemidiya Yezokuxhumana
Khetha amanethiwekhi wakho wokuxhumana nomphakathi - Bheka amaqembu emikhakha eyingqayizivele namakhasimende phakathi kwenkundla ngayinye yezokuxhumana. Angiyena umlandeli wokukhetha eyodwa bese unganaki enye. Ngikholwa ukuthi ungabamba iqhaza kuwo wonke amapulatifomu - kepha gxila futhi ubhekise lapho amathuba aqala ukukhuphuka khona. Akukona konke mayelana nenani labantu nge-infographic.
Gcwalisa Amaphrofayli Akho - Uma ngibona isithombe sephrofayili ejwayelekile, isizinda esilahlekile, noma iphrofayili engaphelele, ngihlala nginqikaza ukulandela noma ukuzibandakanya nenkampani noma umuntu ezinkundleni zokuxhumana. Thatha isikhathi sakho ukusetha futhi unikeze ngephrofayili eyingqayizivele, kodwa ecacile eyazisa injongo yakho yokuba lapho.
Thola Izwi Lakho Nethoni Yakho - Ukungaguquguquki komkhiqizo kubalulekile ku-inthanethi, ngakho-ke qiniseka ukuthi usungula ithoni efanayo lapho wabelana futhi uphendula ezinkundleni zokuxhumana. Gcina wazi ukuthi ngumhlaba omatasatasa, onomsindo laphaya, ungabi nesicefe!
Faka Okubukwayo - Izithombe namavidiyo kuthinta ukubandakanyeka nokwabelana ngezibuyekezo zakho zemidiya yokuxhumana nabantu kakhulu. Thatha izithombe, faka ividiyo, uhlele izingxenye ezithile zamavidiyo wesikhathi sangempela, bese wabelana ngama-shorts evidiyo ezindabeni eziku-inthanethi ukuze usebenzise ipulatifomu ngayinye ofisa ukuhlanganyela kuyo.
Khetha Isu Lakho Lokuthumela - Okwakamuva, okuvamile, futhi okuhlobene yilawa magama amathathu esiwadudulile kule minyaka eyishumi edlule namakhasimende ethu futhi sizoqhubeka nokufuna iminyaka eyishumi ezayo. Ukuhlinzeka ngenani kubalandeli bakho kubalulekile! Angiyena umlandeli wanoma yiziphi izilinganiso zokwabelana, zabelana lapho zibaluleke kakhulu kuzithameli zakho noma emphakathini.
Thuthukisa i-Cadence - Abalandeli bakho nabalandeli bazolindela izibuyekezo zakamuva ezivela kuwe njalo. Imithombo yezokuxhumana imvamisa umdlalo womfutho njengoba okuqukethwe kwakho kwabelwana ngakho futhi kuyaziswa. Ungadangali ekuqaleni ngokulandela okuncane namasheya amancane… vele usebenze kuwo futhi ungapheli amandla! Uma uyeka - nganoma yisiphi isizathu - imvamisa uzothola ukwehla okukhulu okufanele ukunqobe futhi.
Hlela Ikhalenda Lakho Komphakathi - Ingabe kukhona isikhathi esithile ebhizinisini lakho? Ingabe zikhona izibalo ezifanele ongazilayisha futhi uzihlelele kumaphrofayili wakho wezokuxhumana? Ungasikhetha isihloko ongakhuluma ngaso inyanga ngayinye noma isonto ngalinye online? Ukuhlela ikhalenda lakho lezenhlalo kuyindlela enhle yokukhulisa igunya lakho lezokuxhumana, futhi likuvumela ukuthi uhlekise ngekusasa futhi ukhumbuze abantu bakudala ukuze banamathele kuwe.
Ungakhohlwa ukubizelwa esenzweni - Umthetho we njalo uthengise ayisebenzi ne-Social Media… kodwa hlala njalo unolwazig enza! Inhloso yakho kufanele kube ukwazisa nokunikeza inani kunethiwekhi yakho. Njalo ngezikhathi ezithile, bakhumbuze ukuthi bangenzani ngokulandelayo ukuze bahlanganyele nawe nemikhiqizo nezinsiza zakho. Faka i-Call-to-Action kuphrofayela yakho yezenhlalo, kuyindlela enhle yokwenziwa kokushayela ibhizinisi eliningi.
Ukube bengifundisa a I-Social Media Marketing 101 class, ngingeza ngamasu ambalwa abalulekile alahlekile kule infographic:
Ukuqapha Idumela - Usebenzisa ithuluzi elikhulu lokuqapha ezokuxhum, kufanele ulalele noma ikuphi ukushiwo kwemikhiqizo yakho, izinsizakalo noma abantu. Izexwayiso zesikhathi sangempela nezimpendulo nezinqumo ezisheshayo ziyadingeka.
Ubuhlakani bezenhlalo - Ukuxhumana emithonjeni yezokuxhumana kunikeza ngemininingwane eminingi inkampani yakho okufanele iyinake. Imibuzo elindelekile, impendulo yamakhasimende, nemininingwane ethrendayo inganikeza imininingwane ebalulekile ibhizinisi lakho elizosebenza kuyo.
Insizakalo yekhasimende - Manje, kunanini ngaphambili, abathengi namabhizinisi ngokufanayo balindele izinkampani ukuthi ziphendule izicelo zabo zamakhasimende ngeziteshi zenhlalo. Njengoba izinkundla zokuxhumana ziyisithangami somphakathi, kuyithuba elimangalisayo lokuthi amabhizinisi akhombise amandla awo okuletha isixazululo ezindabeni zokuhlinzekwa kwamakhasimende lapho abanye bezokubheka njengempahla.
Setha Imigomo Nokuqapha Ukusebenza - Imisebenzi efana nokulandela, ukuzibandakanya, imizwa nokwabelana yizinkomba eziholayo ukuthi umkhuba wazo kufanele ugadiwe. Imithombo yezokuxhumana ingashayela ukuqwashisa nokuqwashisa kungashayela igunya nokwethemba. Igunya nokwethenjwa kungathonya izinga lenjini yokusesha. Futhi-ke, konke lokhu kungashayela imiphumela yebhizinisi njengokugcinwa, ukutholwa nokukhuphuka kwenani lamakhasimende.
Lokhu infographic kusuka I-Venngage uhamba ibhizinisi ngokusungula nokuthuthukisa isu labo lokumaketha ngezokuxhumana. Futhi kukhona ezinye izeluleko ezinhle lapha zomakethi osunguliwe futhi!
Tags: Insizakalo yekhasimendeukuqalisaukuphathwa kwedumelaukuqapha isithunziimizwaubuhlakani bezenhlalosocial mediaukutholwa kwezokuxhumanaizinhloso zokuxhumana nabantuukusebenza kwezokuxhumanaukugcinwa kwezokuxhumanaisu lokuxhumana kwezenhlaloqala ezokuxhumanaubuthi